Ogaden News Agency (ONA) – Haayada Xuquuqul Insaanka Human Rights Watch oo abaal marin siisay Suxufiyiinta Ethiopia ee cadaadiska ku hoosjira
Haayada Xuquuqul Insaanka Human Rights Watch oo abaal marin siisay Suxufiyiinta Ethiopia ee cadaadiska ku hoosjira
Afar wariye oo u dhashay wadanka Ethiopia ayaa la gudoonsiiyay Abaal gudka Hellman/Hammett 2012 oo ah abaal gud lasiiyo suxufiyiinta la kulma cabudhinta iyo cadaadiska xoriyada qowlka. Abaal gudkan ayaa wariyaashan waxaa guddoonsiisay Haayada Xuquuql Insaanka ee Human Rights Watch (HRW)oo sheegtay Afartaas wariye inay muteysteen in la guddoonsiiyo abaal marintaas maadama ay ka shaqeynayeen sidii Ethiopia loo gaadhsiin lahaa Xoriyatul Qowlka oo ah mid aan ka jirin Ethiopia.
Haayada Xuquuql insaanka HRW ayaa ka warantay dhibaatada Xoriyatul Qowlka ee ka jirta Ethiopia iyaga oo soo bandhigay tacadiyo badan oo loo geysto dadka ka shaqeeya saxaafada. Taliska Gumeysiga Ethiopia ayaa soo saaray sharciyo uu ku xasuuqayo shacabweynaha Ethiopia iyaga oo qofki si xor ah u hadlaba ku eedeeya innuu yahay Argagaxiso halkaasna dhiigiisa iyo maalkisaba lagu xalaaleysto.
Afarta Wariye ee biladan ku guuleystay ayaa ah Wariyaal Hada ku jira Xabsiga Ethiopia oo qaar kood lagu xukumay in kabadan 18 Sanno oo xadhig ah kuwa kalena waxay u qaxeen wadamo kale oo ay nabad galyo siyaasadeed ay ka dalbadeen. Wariyaashan ayaa kala ah
Eskider Nega: oo isagu ku jira xabsiga Guumeysiga Ethiopia waxaa lagu xukumay sanadkii 2011 xabsi dhan 18 sanno oo xadhig ah kadib markii taliska TPLF ku eedeyeen innuu yahay khaayimul Wadan u shaqeeya argagaxiso. Eskinder nega iyo Xaaskiisaba waxay ahaayeen suxufiyiin daawaci jiray Journalka lagu magacabo Serkalem Fasil waxaana xabsiga lamaanahan loo taxaabay marar badan ilaa markii ugu danbeysay xabsi daayimi ah oo gaadhaya 18 sanno lagu xukumay Eskinder Nega.
Wubushet Taye: waxa uu ahaa ku xigeenka Aggaasimaha Awramba Times waxaana suxufigan oo lagu xukumay kiiska Argagaixsada ee lagu cabudhiyo suxufiyiinta Ethiopia. Waxaa uu maxkamada ka hor sheegay in jidh dil loo geystay marki lamaraamarayay balse maxkamada ayaa ka indho qabsatay in jidh dilka loo geystay wariyahan la badaadho maadamada Maxkamadu ay tahay mid u adeegta gumeystaha oo xor aheyn.
Reeyot Alemu: Gabadhan waxay ahayd Macalimad dhigta Luqada Ingiriiska (English) islamar ahaantaasna waxay kusoo qori jirtay “FETEH”- Journalka kaliya ee u danbeeyay ee la odhan karo madaxbanaani yar ayuu heystay.Reeyoy waxaa la qabtay sanadkii 2011 walina waxay ku jirta Xabsiga.
Mesfin Negash: waxa uu wax ku qora Journal Internetka ah oo lagu magacabo “Addis Negar” Ninkan waxaa la xukumay isaga oo ka maqan wadanka Ethiopia maadama uu ka haajiray sanadkii 2009 kadib markii sirdoonka gumeysiga Ethiopia ay kusoo weerareen gurigiiisa. Mesfin waxa uu xidhay Journalki uu soo saari jiray ee Addis Negar waxuuna u fakaday dibada isaga oo u badalay Jorurnal laga aqristo Internetka.
Haayada Xuquuql Insaaka HRW ayaa abbaal gudbkan markii ay bixisay sheegtay in wariyashaan ay matalayaaan kuwa kale ee ku xidhan xabsiyada Ethiopia iyo guud ahaanba tacadiyada ay gumeysiga Ethiopia kuheyso Shcuubta Ethiopia.
Hada ka hor waxaa Abaal gud lasiiyay Heer Caalami ah sidoo kale wariyaal Ajanabi ah oo kasoo waramay dhulka Ogadeniya waxaana kamid ah Jeffrey Gettleman- wariyihii New York Times iyo labadi suxufiyiin ee u dhashay Wadanka Sweden ee lagu qabtay Ogadneiya laguna xukumay 11 sanno ee xabsiga ah balse kadib lasoo daayay. Wariyaasha Caalamka iyo haayadaha Xuquuqul insaanka ayaa aad uga hadla xaalada Ogadeniya iyo sida dhulkaas u madax banaaneyn ee loogu oggoleyn warbaahinta Caalamka iyo Haayadaha Madaxa banaan intaba.